သတင်း - claw couplings အသုံးပြုပုံ
claw couplings အသုံးပြုပုံ
Claw coupling များကို စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လေနှင့်ရေအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။အချိတ်အဆက်၏ နှစ်ခြမ်းစလုံးသည် အတိအကျတူညီသည် - Coupler နှင့် Adapter အကြား ကွဲပြားမှုမရှိပါ။၎င်းတို့တွင် ခြေသည်းများ (ခြေသည်းများ) နှစ်ခုစီပါရှိပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ဝက်၏ ဆက်စပ်အထစ်များတွင် ပါဝင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို တွန်းပြီး လှည့်ရုံဖြင့် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။သို့ရာတွင်၊ တူညီသောခြေသည်းအကွာအဝေးနှင့် အမျိုးအစားတူဒြပ်စင်များကိုသာ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
1. အချိတ်အဆက်နှစ်ခုကို တံဆိပ်နှင့်ထိသည်အထိ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် 180° တွင် တွန်းပါ။ထို့နောက် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အချိတ်အဆက်၏ တစ်ဝက်ကို အခြားတစ်ဖက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ရောက်သွားသည်အထိ လှည့်ပါ - အချိတ်အဆက်များသည် နေရာသို့ သော့ခတ်သွားပါသည်။
2. အဆက်ဖြတ်ရန်၊ coupling နှင့် counterpart ကို axial direction ဖြင့် တွန်းပါ။ထို့နောက် ချိတ်ဆက်ထားသော တစ်ဖက်မှ ဖယ်ရှားသည့်အခါ သင်ပြုလုပ်လိုသည့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်သို့ တတ်နိုင်သမျှ တစ်ဝက်ကို ချိတ်ဆက်ကာ တစ်ဖက်ကို လှည့်ပါ။
3.ပြီးပြည့်စုံသောချိတ်ဆက်မှုသေချာစေရန်၊ MODY-safety-screwing coupling ရှိ သော့ခတ်ထားသော nut ကို ကိုယ်တိုင် တင်းကျပ်ထားသည်။
ဤချိတ်ဆက်မှုသည် လုံးဝလုံခြုံသည်၊ ချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူပြီး 100% ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံနိုင်သည် ။
claw coupling များကို အောက်ပါ အမျိုးအစားများ ခွဲခြားထားပါသည်။
1.American Type အပါအဝင် Hose end, Male, Female, Blanked, Triple connection
အင်္ဂါရပ်များ- အဖြူရောင်သွပ် NPT ကြိုးများ
2. ရေပိုက်အဆုံး၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ SKA34 နှင့် ဥရောပ အမျိုးအစား ပိုက်အဆုံး၊ လှေကားထစ်ဖြင့် အမျိုးသမီးအဆုံး၊ ရေပိုက်အဆုံး ပါဝင်သည့် ဥရောပအမျိုးအစား၊
ခြေသည်းအချိတ်အဆက်များကို ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံပိုက်ကုပ်များ သို့မဟုတ် အခြားကုပ်များပါသော ပိုက်များဆီသို့ စုစည်းထားသည်။
claw couplings များသည် compressed air transfer၊ pneumatic tools များနှင့် pneumatic စနစ်များ ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းရှိ ရေစနစ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပန်းမန်စိုက်ခင်းများ အစရှိသည့် အသုံးချပရိုဂရမ်များကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ခြေသည်းအချိတ်အဆက်များကို ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံပိုက်ကုပ်များ သို့မဟုတ် အခြားကုပ်များပါသော ပိုက်များဆီသို့ စုစည်းထားသည်။
Air hose couplings များသည် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ကြမ်းများနှင့် စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အဆင်ပြေသော အမြန်ချိတ်ဆက်စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် claw coupling & double bolt clamp ကိုထုတ်လုပ်ရန် နှစ် 30 ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နာမည်ကောင်းရတာကို ခံစားပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် နိယာမကို အမြဲအခိုင်အမာဆိုသည်- အရည်အသွေး ပထမ၊ ဝန်ဆောင်မှု အကောင်းဆုံး။
လျောက်ပတ်တယ်။, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, Hose With Coupling, American Standard Fittings များ, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ, Hinged Pipe Clamp,
ခြေသည်းကြိုးများကို လေဝင်ပေါက်အတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်...